James Ellroy. Iyo Mad Imbwa inoshandura makumi manomwe nemaviri. Kusarudzwa kwemashoko | Zvazvino Zvinyorwa
James ellroy, the Imbwa Rabid yenhau yekuNorth America mhosva, anotendeuka 72 nhasi. Saka kune atove mashoma Kurume vachihukura nemabhuku avo ehudhimoni. Yangu yerudo / yekushungurudza nyaya neiyi huru yakaguma gore rapfuura apo Ndakaita rombo rakanaka kusangana naye uye ndiise mukati menzvimbo dzayo dzakapinza kwazvo nengoro. Ndakatoudza pano. Asi nhasi, kupemberera zuva rake rekuzvarwa, ndazviita kubvuta kwemitsara yemanovel ake, andinenge ndanongedzera zvakanyanya, ndadhonzera uye ndakabatisisa. Ngakuve nevamwe vashoma, VaEllroy.
1 James Ellroy - Mutsara Sarudzo
1.2 Nekuda kwehusiku (1984)
1.3 Ropa pamwedzi (1984)
1.4 Kuzviuraya Chikomo (1985)
1.6 Iyo Nhema Dahlia (1987)
1.7 Iyo Great Desert (1988)
1.8 Los Angeles Yakavanzika (1990)
1.11 Makona angu erima (1996)
James Ellroy - Mutsara Sarudzo
Nguva nenzvimbo zvinondimanikidza. (…) Nhasi nhasi uye hakuchazombovapozve.
Kiyi yechishamiso yakawanikwa murufu. Ini ndanga ndatouraya, kaviri, uye izvo zvainge zvachinja ini. Asi kiyi yakanga isiri murufu, asi mukuwanikwa kweizvo zvakange zvakatungamira kwairi.
Nemhaka yeusiku (1984)
Chinangwa changu muhupenyu huno kusaita "chero chinhu" zvakanaka kwazvo. Mhosva yangu yaive yekuti ndaifarira kuzviita nemota dzakabiwa.
Husiku hunofanira kukundwa; chete avo vari pamusoro pemitemo yaro ndivo vanogona kutora zvakapambwa uye vapone.
Ropa pamwedzi (1984)
Aisanzwanana nemunhu uye aive asina basa nazvo. Akange asiri benzi, asiri mutambi, asiri mwanakomana wehure. Aive asiri ega ega, aive akangosiyana.
Kuzviuraya chikomo (1985)
Nechiratidzo, Sajeni Hopkins, anozvitsanangura "akaomarara mupurisa" uye epicurean, sekuzvitsanangura kwaakaita, akateedzera kurudziro yake yechisimba uye zvishuwo zvebonde nekushinga kwekusaziva kwechokwadi sociopath.
Muurayi weHighway (1986)
Nekutora hupenyu hwavo, ndakasangana navo munguva dzakanakisa dzekuvapo kwavo.
Ndakaburitsa demo rangu reTeflon rine matte nesimbi yaive nevimbiso ndokumurova nayo muhuro. Musoro wakange wakaparadzaniswa zvakanakisa kubva pahunde uye ropa rakayerera kubva mudumbu; maoko nemakumbo zvakabvaruka, ipapo muviri wake wese wakadonhera pasi. Simba rekurohwa rakanditenderedza, uye kwechipiri chiratidzo changu chakakomberedza chiitiko chose: madziro akasaswa neropa, chitunha chadzinga geyser yeguruva kubva mumutsipa, apa moyo uchiramba uchirova zvisingaite.
Dema Dahlia (1987)
Kune vanhu vasingakwanise kupindura zvakakwana kururemekedzo.
Ndakanzwa kakapetwa kagumi kupfuura zvandakanga ndamboita mhete, uye kwete nekuti nyonganiso yakanga ichitivharira kubva kumativi ese. Ini ndaitya, nekuti pachokwadi vakanaka vaive vakaipa vakomana.
Gwenga guru (1988)
Ndiri kufara kuva newe kune njodzi. Zvinonyaradza.
Zvese zvakaburukira kumari, iyo dhinomineta yakaenzana nezvose.
Los Angeles Chakavanzika (1990)
Mapurisa akatambura nemiyedzo yakafanana neyavanhuwo zvavo, asi vaifanira kuve nehunhu hwavo kusvika padanho rakakura kuti vashande semhando dzehunhu munzanga iri kuwedzera kukanganiswa nekukura kwesimba remakomunisiti, mhosva, rusununguko, uye hunhu husina kutsarukana.
Iwo manotsi airatidzira murume akaganhurirwa aitsvaga nyeredzi, uye achisvika dzinenge dzese dzadzo. Miganho yakapfuurwa kuburikidza nekutsungirira kwehasha. Mhedziso, isingazivikanwe kururamisira, pasina kukwidziridzwa kana mbiri. […] Wendell Bud White akaonekwa kekutanga.
Jazz chena (1992)
Kuonekana kwake: isu takanyanya kunaka kurasikirwa.
Iwe uri peeper zvakare, mukomana. Iwe wasangana neako ako erima maitiro uye ikozvino unonakidzwa nekunakidzwa kwekuve kungori mucherechedzi.
Iwe haugone kurasikirwa nezvausati wambove nazvo.
Makona angu erima (1996)
Aive asiri kana kuderera pane ruponeso rwangu.
Vakafa ndevapenyu vanovatora zvakanyanya.
Nhoroondo inobata vese vanhu nenyika. Nhoroondo inotora chimiro chechikwereti chakakura icho vanhuwo zvavo vanobhadhara muropa.
Iye akanamata varume uye akapenga nechishuwo chakadzvinyirirwa. Izvo zvakanditungamira kune akateedzana adventures nevatambi vasina kuvimbika vejairi. Zvepabonde handizvo zvandaifungidzira. Kwaive kunetsekana, kunhuwidza, uye nemubatanidzwa usinganakidzi. Chakanga chiri chizaruro chinotapira uye chinosuwisa, uye tariro yangu yese yakadzimwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » James Ellroy. Iyo Mad Imbwa inotendeuka makumi manomwe nemaviri. Mutsara kusarudzwa